जो कोही आमा सन्तान बचाउन आफैलाई बाजी थाप्छिन् : यो सन्देशको भिडियोले संसारलाई रुवायो ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । चाहे मानिस होस् वा पशु, सबैको आमा हुन्छन् । आमा जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई बचाउन आफ्नो जीवनको पनि वास्ता गर्दैनन् । उनी जीवित छँदा आफ्ना बच्चाहरूलाई केही हुन नदिनका लागि ज्यानलाई जोखिममा राख्ने गर्छन् । आमाको ममता समान भिडियो अहिले बाहिर आएको छ । यो भिडियो हेर्दा तपाईंको आँखाहरू पक्का रसाउनेछन् ।
यस भिडियोमा, एउटा हाँस आफ्ना बच्चाहरूको साथमा खाल्डामा बसेको छ । अचानक एउटा ठूलो अजिङ्गर त्यहाँ आउँदछ । अजिङ्गरले बच्चाहरूलाई हमला गर्दछ । जब आमा हाँसले सर्पलाई देख्यो तब उसले एक पछि अर्को गर्दै खाडलबाट बच्चाहरुलाई त्यहाँबाट आफ्ना सबै बच्चाहरूलाई बाहिर निकाल्न सफल हुन्छ । तर त्यसबेला सम्म ढिलो भइसक्यो र बच्चाहरुलाई बचाउँन खोज्दा खोज्दै उनलाई सर्पले समात्यो ।
यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइरहेको छ । यस भिडियोको क्याप्शनमा लेखिएको छ, ‘आमाको प्रेमको शक्ति संसारमा सब भन्दा ठूलो हो ।’ यो भिडियो देखेर, मानिसहरू भावुक भइरहेका छन् ।
उनीहरूका टिप्पणीहरू मार्फत आमाको मायालाई अभिवादन गरिरहेका छन् । साथै, केही प्रयोगकर्ताहरू भिडियो बनाउने व्यक्तिको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रयोगकर्ता द्वारा लेखिएको भिडियो लिनुको सट्टा, उक्त व्यक्तिले यो हाँसको जीवन बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
तपाँईहरू खानामा अजिनो’ मोटोको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? ख्याल गरौँ गम्भीर समस्याको कारण बन्न सक्छ सबैले हेर्नुहोस्